आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्न जान्नैपर्ने १० कुरा - Tech News Nepal Tech News Nepal
बुधबार, पुष २९, २०७७ २२:१८
आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सुरक्षित राख्न जान्नैपर्ने १० कुरा
काठमाडौं । अहिलेको समयमा फेसबुक अकाउण्ट नभएको मानिस कमै हुन्छन् । फेसबुक तपाईंका लागि सहज मात्रै नभएर खतराको विषय पनि बन्न सक्छ, त्यसैले यसलाई सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने तर्फ हरेक प्रयोगकर्ताले ध्यान दिन जरुरी छ । आज हामी तपाईंहरुलाई फेसबुक कसरी सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१. बलियो पासवर्ड
सबैभन्दा पहिला तपाईंले फेसबुकमा मजबुत पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ । फेसबुकले सधैं प्रयोगकर्तालाई त्यसका लागि प्रयोगकर्तालाई समेत सचेत गराउँदै आइरहेको छ । तर तपाईं हामी धेरैले भने यसलाई त्यति गम्भीरताका साथ लिइहरेका हुँदैनौँ । तर यो एकदमै जरुरी छ ।
अंग्रेजी ठूलो, सानो अक्षर, अंक, र चिन्हहरु सबैलाई मिश्रित रुपमा राखेर आफ्नो पासवर्ड बलियो बनाउन सकिन्छ । सम्झिन सजिलो ठानेर आफनो व्यक्तिगत सूचना तथा जानकारीसँग सम्बन्धित र अरुले सहजै अनुमान लगाउन सकिने किसिमका शब्द तथा अंक पासवर्डमा नराख्नुहोस् ।
त्यस्तै ईमेल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम लगायतका विभिन्न आईडीका लागि एउटै पासवर्ड पनि नराख्नुहोस् । किन कि कुनै कारण एउटा आईडी ह्याक हुँदा ह्याकरले अन्य अकाउण्टमा समेत पहुँच बनाउन सक्छ ।
२. टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन
टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन प्रयोग गरेर तपाईंले आफ्नो अकाउण्ट थप सुरक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ । टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भनेको तपाईंले फेसबुक लगईन गर्ने बेलामा पासवर्ड राखेपछि फेसबुकले तपाईंको फोनमा एउटा ओटीपी कोड (म्यासेज) पठाउँछ । र त्यो कोड राखेपछि मात्रै तपाईंले आफ्नो फेसबुक खोल्न पाउनुहुन्छ ।
यो फिचर प्रयोग गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईं आफ्नो फेसबुकको सेटिङमा गएर सेक्युरिटी एण्ड लगईन भन्ने अप्सन छनौट गर्नुहोस् । यसमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन भन्ने अप्सन छ र त्यहाँ रहेको युज टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा जानुहोस् ।
अब त्यहाँ गूगल अथेन्टिकेटर प्रयोग गर्ने कि एसएमएस प्रयोग गर्ने भनेर दिइएको हुन्छ । त्यसमा हामी तपाईंलाई एसएमएसको विकल्प छनौट गर्न सुझाव दिन्छौँ ।
किन कि यो अलि सहज र बढी सुरक्षित हुन्छ । अब त्यहाँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस् । त्यस पछि तपाईंको फोनमा ओटीपी कोड आउँछ । र त्यही कोडलाई त्यहाँ रहेको बक्समा राख्नुहोस् । यति गरेपछि तपाईंको फेसबुकमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेशन एक्टिभ हुन्छ ।
यस बाट अब तपाईंले जुन कुनै नयाँ डिभाइसमा फेसबुक लगईन गर्दा ओटीपी कोड अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले तपाईंको पासवर्ड थाहा पाइहाले पनि ओटीपी कोड बिना फेसबुक खोल्न सक्नेछैन ।
३. ट्रस्टेड फ्रेन्ड्स
फेसबुकले ट्रस्टेड फ्रेन्ड्स अर्थात विश्वासिलो साथीलाई एड गर्ने एउटा अर्को फिचर पनि दिएको छ । त्यसमा चाहिँ तपाईंले आफ्नो विश्वासिलो साथीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ ।
कहिले काहिँ तपाईंले आफ्नो पासवर्ड र सेक्युरिटी सम्बन्धि प्रश्न तथा उत्तर बिर्सिँएको खण्डमा फेसबुकले तपाईंले एड गर्नुभएको विश्वासिलो साथीलाई एउटा ओटीपी कोड पठाइदिन्छ । र त्यो कोड बाट तपाईंले आफ्नो फेसबुक लगईन गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि फेसबुकको सेटिङमा रहेको सेक्युरिटी एण्ड लगईन अप्सनमा जानुहोस् । अब त्यहाँ रहेको सेटिङ अप एक्स्ट्रा सेक्युरिटी भन्ने अप्सन छानेर ‘योर फ्रेन्ड्स टु कन्ट्याक्ट ईफ यू गेट लग्ड आउट’ सेलेक्ट गर्नुहोस् । र त्यहाँ चुज ट्रस्टेड कन्ट्याक्टमा थिचेपछि तपाईंले आफ्नो विश्वासिलो साथीलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ ।
४. अलर्ट अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लगईन
अघिकै सेटिङ अप एक्स्ट्रा सेक्युुरिटीमा गेट अलर्ट अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लगईन भन्ने अप्सन पनि छ । त्यो इनेबल गर्नुभयो भने अस्वभाविक ठाउँ वा अस्वभाविक डिभाइसबाट तपाईंको फेसबुक अकाउण्ट कसैले खोल्यो भने तत्काल तपाईंलाई म्यासेन्जरमा वा ईमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ ।
यो फिचर प्रयोग गर्नका लागि अघिकै ‘सेटिङ अप एक्स्ट्र सेक्युरिटीमा गेट अलर्ट अबाउट अनरिकग्नाइज्ड लगईन’ मा जानुहोस् । र त्यहाँ इमेल आईडी, म्यासेञ्जर वा फेसबुक, कुनमा नोटिफिकेसन पाउन चाहनुहुन्छ, त्यसलाई छनौट गर्नुहोस् । हामी चाहिँ यहाँनिर सबै अप्सन छनौट गर्न सुझाव दिन्छौँ ।
५. जहाँ तपाईंको फेसबुक लगईन छ
तपाईंको फेसबुक अरु कसैले चलाइरहेको त छैन ? यसबारे ढुक्क हुन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकले त्यसको विकल्प पनि दिएको छ । यसका लागि सुरुमा फेसबुकको सेटिङमा जानुहोस् । अब सेक्युरिटी एण्ड लगईनमा गएर ‘ह्वेर यू आर लग्ड ईन’मा तपाईंले आफ्नो फेसबुक अन्यत्र कसैले चलाइरहेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि कसैले चलाईरहेको रहेछ वा कतै लगईन छ भने छेउमा रहेको तीन ओटा थोप्लामा थिचेर लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंलाई त्यो डिभाइसको बारे अझ धेरै जानकारी लिनु छ भने ‘सेक्योर अकाउण्ट’मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
६. अनलिंक सर्च इन्जिन
फेसबुक अकाउण्ट सुरक्षित राख्नका लागि अर्को ध्यानमा राख्नुपर्ने महत्वपुर्ण कुरा चाहिँ सर्च इन्जिनहरु तपाईंको प्रोफाइलसँग लिंक भएका हुनसक्छन् । त्यसो हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनुहोस् ।
यदि लिंक भएका छन् भने आफ्नो फेसबुकको सेटिङमा जानुहोस् । त्यहाँ रहेको प्राइभेसी सेटिङ भन्ने अप्सन थिच्नुहोस् । र स्क्रोल गरेर अन्तिममा जानुहोस् । अन्तिम अप्सन ‘अलाउ सर्च इन्जिन आउटसाइड अफ फेसबुक टु लिंक टु योर प्रोफाइल’ मा इनेबल छ भने डिसेबल गर्नुहोस् ।
७. व्यक्तिगत जानकारीमाथि नियन्त्रण
अब अघिको स्थानबाट पछाडि फर्किनु भयो भने प्राइभेसी सेटिङमै क-कसले तपाईंको फ्रेन्ड्स लिस्ट, ईमेल एड्रेस, र फोन नम्बर हेर्न सक्छ भनेर त्यसको जानकारी दिइएको हुन्छ ।
पालैपालो यी तीनै अप्सनमा थिचेर अन्ली मी अप्सन छनौट गर्नुहोस् । यति गरेपछि तपाईंको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्ट, तपाईंको फोन नम्बर र ईमेल आईडी अरुले हेर्न पाउने छैन ।
८. फेस रिकग्निसन
तपाईंको साथीले फोटो पोस्ट गर्दा कहिलेकाहिँ फेसबुकले तपाईंको अनुहार चिनेर आफै ट्याग गरिदिन्छ । यसबाट छुट्कारा पाउन चाहनुहुन्छ भने फेसबुकको सेटिङमा जानुहोस् र त्यहाँ रहेको प्राइभेसीको दोश्रो विकल्प ‘फेस रिकग्निशन’मा प्रवेश गर्नुहोस् ।
अब ‘कन्टिन्यु’ थिच्नुहोस् र टर्न अफमा जानुहोस् । यति गरेपछि अब फेसबुकमा अरुले तपाईंको फोटो पोस्ट गर्दा आफै ट्याग हुने झञ्जटबाट छुट्कारा पाउन सक्नुहुनेछ ।
९. थर्डपार्टी एप
फेसबुकबाट हामीले विभिन्न थर्ड पार्ट एपहरु प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । तर तपाईं हामी मध्ये धरैलाई फेसबुक नै चलाइरहेको जस्तो लागिरहेको हुन्छ ।
तपाईंको अनुहारलाई बुढो देखाउने, भविष्य बताइदिने, तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने मान्छेको नाम भनिदिने, र यस्तै किसिमका अनेक आकर्सक क्याप्सन राखेर अनेकौं थर्डपार्टी एपहरुले तपाईंलाई प्रयोग गर्न लोभ्याइरहेका हुन्छन् ।
त्यस्ता एपहरुबाट तपाईंको फेसबुक ह्याक हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । र तपाईंको महत्वुर्ण अनि एकदमै गोप्य डेटा पनि लिनसक्छ । त्यसैले सकेसम्म त्यस किसिमका एपहरु प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस् ।
१०. फेसबुकसँग भएको जानकारी
फेसबुकले तपाईंको महत्वपुर्ण सूचना र जानकारी सेभ गरेर राखेको हुन्छ, भन्ने बारेमा त तपाईं जानकार नै हुनुहुन्छ होला । तपाईंको कुन कुन डेटा फेसबुकले सेभ गरेको छ, भनेर तपाईं आफैंले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसका लागि सेटिङमा जानुहोस् । र त्यहाँ अलि तल रहेको ‘योर फेसबुक इन्फरमेस’ छ । त्यसको पाँचौ विकल्प “डाउनलोड योर इन्फरमेसन’ छनौंट गर्नुहोस् । त्यहाँ सबैभन्दा तल ‘क्रियट फायल’ अप्सनमा जानुहोस् ।
यति गरेपछि फेसबुकमा तपाईंको अनुरोध जान्छ । फायल तयार भएपछि फेसबुकले तपाईंलाई जानकारी दिन्छ र त्यसलाई डाउनलोड गरेर ‍फेसबुकसँग रहेको आफ्नो डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ ।
फेसबुकमाथि बेलाबखत प्रयोगकर्ताका यस्ता डाटा बिक्री गरेको आरोपको सामना गर्दै आएको छ । तपाईं यस किसिमको आफ्नो डेटा फेसबुकसँग नरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्रयोग गर्न बन्द गर्नु सिवाय हाललाई अर्को विकल्प छैन ।
यसरी तपाईं आफ्नो फेसबुक अकाउण्टलाई सुरक्षित राख्न तथा सुरक्षित रुपमा चलाउन सक्नुहुन्छ । तर, यति गर्दैमा फेसबुक पूर्णतः सुरक्षित हुन्छ भनेर ढुक्क भने नहुनुहोस् । फेसबुक लगईन गरेपछि लगआउट गर्न कहिल्यै पनि नबिर्सिनुहोस्